बिन्दास मुडमा वाइनको लिदै सुष्मा कार्की, बाहिरियो हट भिडियो – Hamro24News
July 14, 2021 adminLeaveaComment on बिन्दास मुडमा वाइनको लिदै सुष्मा कार्की, बाहिरियो हट भिडियो
नायिका सुष्मा कार्की नेपाली फिल्म क्षेत्रको चर्चित नायिका हुन् ।
निकै नै बोल्ड अवतारमा देखिएकि सुष्माको हातमा वाईन छ । त्यसैगरि, गीतमा सुष्मा मस्त छिन् । कुनै बेला नेपाली चलचित्रको आइटमदेखि अभिनयमा समेत व्यस्त रहने नायिका सुष्मा कार्कीको हातमा यतिबेला खासै चलचित्र छैन ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
बिहान सधै जस्तै म ६ बजे उठेँ । बिहान उठेर फ्रेस हुने वित्तिकै म कृष्णलिला पढ्ने गर्छु । म विगत ८ बर्षदेखि बिहान बेलुकी पूजापाठ गर्छु । घरमा ममी अहिले नहुनु भएकाले पनि खाना, खाजा आफै बनाउनुपर्छ । फेरि, भाई आएकाले पनि बिहानको खाजा र खान बनाएँ । खाना पकाउने, भाडा माँझ्ने काम सकेर फ्रेस भए ।
यसपछि गाडी धोएर म घरका लागि सपिङ गर्न बाहिर निस्किएँ । आज घरका लागि आवश्यक सामाग्री किन्नु थियो, दिनभर जसो सपिङमा नै दिन वित्यो । कुपन्डोलमा आज धेरै नै घरयासी सपिङ गरेँ । सामान किनेर केहि समय अर्को एउटा काम थियो, त्यो सकेँ । यसपछि भाटभटेनी पुगेर तरकारी किनेँ ।
साग, केराउ लगायतका विभिन्न तरकारी किनेर घर पुगेँ । घर पुगेर बत्ती बालेँ । म हरेक दिन बेलुकी बत्ती बाल्छु । म सबै भगवानलाई उत्तिकै मान्छु । घरमा आएपछि अहिले खाना बनाइरहेकी छु । खाना खाएपछि बेलुकी म समाचार पढ्ने, इन्स्ट्राग्राम हेर्ने गर्छु ।
सामाजिक संजालमा पनि केहि अपडेट त हुनै पयो नी होइन र ? म हरेक दिनलाई नै सकारात्मक रुपमा हेर्ने गर्छु । हरेक प्रहरलाई सकारात्मक रुपमा हेर्न सके मानिस खुशी पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ । केही दिनयता सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा नायिका सुष्मा कार्कीले दिएका केही अन्तर्वार्ता चर्चामा छन् । सुष्माले नायिका पूजा शर्मादेखि गायिका मेलिना राईसम्मलाई चिन्दिन भन्दै दिएको अन्तर्वार्ताले टिकटकमा चर्चा पाएको छ। जहाँ पूजाको अभिनयमा समेत सुष्माले प्रश्न उठाएकी छिन् ।
यो भिडियो केही समय अगाडिको हो । तर, लकडाउनको समयमा यो भिडियो चर्चामा रहेपछि नायिका सुष्मा कार्कीलाई टिकटकमै दर्शकले गाली गर्न सुरु गरेका छन् । उनलाई एक कलाकार भएर अर्को कलाकारको सम्मान गर्न नजानेको भन्दै दर्शकले आलोचना गर्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी धेरै भएपछि टिकटककै माध्यमबाट सुष्माले पूजासँगको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेकी छिन् ।
सुष्माले भनेकी छिन्, ‘दुई वर्ष अगाडिको भिडियो अहिले भाइरल गराएर किन नराम्रो बनाउनु । पूजा र मेरोबीच राम्रो सम्बन्ध छ । उनले मलाई दिदी भन्छिन्, म उसलाई बहिनी भन्छु । मिडियाले उचालिदिएर हामो सम्बन्ध बिगार्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।’ सुष्माले पुरानो भिडियो केही समय भाइरल हुने र यसपछि हराउने भन्दै अहिले भाइरल बनाउँदा कसलाई फाइदा हुन्छ र ? भन्दै प्रश्न पनि गरेकी छिन् ।